Ento miakatra ity… | NewsMada
Ento miakatra ity…
… Saran-dalana, vidim-bary, sns. Mihazakazaka, miakatra, miakatra, miakatra ! Maro ireo fanazavana etsy sy eroa mamahavaha sy manazava ny antony. Ny ankamaroan’izy ireny anefa, na fanazavana misavaon-danitra (ento miakatra !) natokana ho an’ireo olom-bitsy nianatra manokana momba ny toekarena, na fanazavana manao tsinontsinona ny vahoaka sy mihevitra ny vavalabemandry ho bado sy tsy mahita ny tena zava-misy marina.
Mbola « hoento miakatra » ihany koa ireo fepetra sy vahaolana nambara fa iatrehana ireo fiakarana isan-karazany ireo. Tsy ny mpanjifa (vahoaka mpihinam-bary) no atao izay ahafahany mividy vary fa ny mpandraharaha no tsinjovina tsy ho fatiantoka. Tena samy hafa be mihitsy ireo na inona na inona fanazavan’ireo mihevitra fa mpahay toekarena sy kinga amin’ny raharaham-barotra!
Tsara ny lanja miakatra fa ratsy ny miakamiaka-poana. Ny tsy tokony hiakatra, miakatra, fa ny mila ampiakarina, ampidinina. Fomba fanaon’ny mpanjakazaka an-tanin’olona (« mpanjanatany », hoy ny fomba filaza teo aloha) io mba tsy hahafahan’ny firenena « voazanaka » sy ny mponina ao aminy tsy ho afa-mikofoka anaty fahantrana… Kanefa mbola mitohy na efa ho 57 taona aza izao ny nahazaoan’i Madagasikara ny Fahaleovantenany. Tranga toa manamafy ny tenina mpahay tantara vahiny iray nilaza fa « an-taratasy ihany ny Fahaleovantena azon’ireo tany voazanaka fa ny mpitondra, mbola ireo « zaza navelan’ny mpanjanaka » ihany ».
… Ampiakaro ny fahefa-mividy eo amin’ny vahoaka malagasy. Manana ny hareny i Madagasikara hahafahana manao izany. Manana ny zanany vonona sy afaka mampandroso azy i Madagasikara. Ny ampiakarina betsaka fa ny toe-tsaina hoenti-mampiakatra mihitsy no manahirankirana ny mahita azy. Anisan’ireny ny fitiavan-tanindrazana, tahotra an’Andriamanitra, tahotra ny tody, sns. Tsotra, ampiakaro ny maha Malagasy, ho voavaha ny olana.